Ch 21 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 21 Luke
21:1 Ary nijery manodidina, nahita ny mpanankarena mandatsa-fanomezana an-offertory.
21:2 Avy eo dia nahita anankiray koa ny mpitondratena, ny nahantra tanteraka, fanaovana in farantsakely roa.
21:3 Ary hoy izy:: "Marina tokoa fa, Lazaiko aminareo, fa io mpitondratena malahelo io no efa nandatsaka be noho ny hafa rehetra.
21:4 Fa ireo rehetra ireo, avy tamin'ny haben'ny fananany, efa nampitombo ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Fa izy, avy amin'ny zavatra ilaina, efa nataony tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany. "
21:5 Ary raha ny sasany tamin'izy ireo dia nanao hoe:, momba ny tempoly, dia nisy tsara voaravaka vato tsara sy fanatitra, hoy izy:,
21:6 "Izany zavatra izany izay hitanareo, ho tonga ny andro, raha misy dia tsy ho namela vato vato, izay tsy horavana. "
21:7 Ary izy ireo nanontany azy, nanao hoe:: "Mpampianatra, Rahoviana no hisy izany ho? Ary inona no ho famantarana, rehefa izany no hitranga?"
21:8 Ary hoy izy:: "Aoka ho malina, fandrao ho voafitaka. Fa maro no ho avy amin'ny anarako, nanao hoe:: 'Fa Izaho no Izy,'ary, 'Ny fotoana efa akaiky.' Ary toy izany koa, aza misafidy ny handeha hanaraka azy.
21:9 Ary rehefa ho efa nandre ny ady sy ny fisarahana, aza matahotra. Izany zavatra izany dia tsy maintsy ho tonga aloha. Fa ny farany tsy ho ela dia tsy toy izany. "
21:10 Dia hoy izy taminy: "Ny olona hitsangana hanohitra ny olona, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana.
21:11 Ary hisy horohoron-tany lehibe amin'ny tany samy hafa, ary ny areti-mandringana, ary ny mosary, ary ny tahotra avy any an-danitra; ary hisy famantarana lehibe.
21:12 Raha tsy mbola tonga izany rehetra izany, dia hisambotra anareo izy ka hanenjika anao, nanolotra anao eo amin'ny synagoga sy ao an-tranomaizina, mitaritarika eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny governora, noho ny anarako.
21:13 Ary izao no ho fahafahana ho anao mba ho vavolom belona.
21:14 Noho izany, nametraka izany ao am-ponareo: fa tsy tokony hihevitra mialoha ny fomba mety mamaly.
21:15 Fa Izaho no hanome anareo vava sy saina, izay azon'ny fahavalonareo rehetra dia tsy ho afaka manohitra na mifanohitra.
21:16 Ary ianao hatolotry ny ray aman-dreninao, sy ny rahalahiny, sy ny fianakaviany, sy ny namany. Ary izy no hitondra ny fahafatesan'ny sasany aminareo.
21:17 Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako.
21:18 Kanefa, tsy singam-bolo iray eo amin'ny lohanareo aza dia ho very.
21:19 By ny faharetana, no handova ny fanahinareo.
21:20 Avy eo, rehefa nahita an'i Jerosalema dia voahodidina miaramila, fantany avy eo fa ny fandravana Efa akaiky.
21:21 Dia aoka izay olona any Jodia handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao aminy hiala, ary ireo izay any ambanivohitra tsy ho tafiditra aminy akory.
21:22 Fa ireo dia andro famaliana ny, ka ny zava-drehetra, mba ho tanteraka, izay efa voasoratra.
21:23 Dia loza ho an 'ireo izay bevohoka na fitaizana be antitra tamin'izany andro izany. Fa hisy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana mafy amin'ity firenena ity.
21:24 Dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra. Ary izy ireo dia ho voataona toy ny babo ho firenena rehetra. Ary Jerosalema hohitsahin'ny 'ny Jentilisa, mandra-pihavin'ny fotoana ho an'ny hafa firenena no tanteraka.
21:25 Ary hisy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary hisy, eto an-tany, fahoriana any amin'ny jentilisa, avy ny fifanjevoana teo amin'ny firohondrohon'ny ranomasina sy ny onja:
21:26 ny olona malazo izy noho ny tahotra sy ny ahiahy avy ny zavatra izay hanarona izao tontolo izao. Fa ny herin'ny lanitra dia hihetsika.
21:27 Ary ny olona hahita ny Zanak'olona avy eo amin'ny rahona, amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra.
21:28 Fa rehefa vita izany zavatra hitranga manomboka, asandrato ny lohanareo ary mijery ny manodidina anao, fa akaiky ny fanavotana anareo. "
21:29 Ary nambarany azy ny fampitahana: "Handray an-tsoratra ny aviavy sy ny hazo rehetra eny.
21:30 Ary raha izy ireo ankehitriny hamoa voa avy tenany, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona.
21:31 Noho izany dia koa, rehefa ho efa nahita ireo zavatra ireo hitranga, fantatrareo fa ny fanjakan'Andriamanitra dia akaiky.
21:32 Amen Lazaiko aminareo, izany rohim-pirazanana tsy mba ho levona, mandra-pahatongan'izany rehetra izany hitranga.
21:33 Ny lanitra sy ny tany ho levona. Fa ny teniko tsy mba ho levona.
21:34 Fa hihaino tsara ny tenanareo, fandrao ny fonareo mba ho vesaran'ny tena-po sy inebriation ary ny fiahiahiana izao fiainana. Ary amin 'izany andro izany, mba hanafotra anao tampoka.
21:35 Fa tahaka ny fandrika dia hanarona izay rehetra mipetraka eny ambonin'ny tany manontolo.
21:36 Ary noho izany, ho mailo, mivavaka amin'ny fotoana rehetra, mba hatao mendrika ny handositra avy rehetra izany, izay ao amin 'ny ho avy, ary hitsangana eo anatrehan'ny Zanak'olona. "
21:37 Ary nony andro, dia nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly. fa tena, miala amin'ny hariva, dia nitoetra teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva.
21:38 Ary ny olona rehetra tonga tao an-maraina mba nihaino azy tao amin'ny tempoly.